Top 10 Best Free MKV egbutusị
Top 10 Free MKV egbutusị bee MKV Files abụọ n'akụkụ
Ọ bụrụ na ị na-enwe MKV faịlụ na-adịghị izute gị chọrọ size, ogologo ma ọ bụ àgwà, mgbe ahụ ị mkpa iji nweta edezi ngwaọrụ. The ngwaọrụ abịa kemfe mgbe ọ na-abịa ịcha videos ka obere iberibe na iwepu achọghị fim ma ọ bụ obere vidiyo. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile ngwaọrụ enye ezigbo results n'ihi na ha set elu. N'otu aka ahụ, ụfọdụ ndị dị nnọọ oke ọnụ. Dabara nke ọma, elu Ịrụ free egbutusị nwere ike dị na internet na ndị mmadụ kwesịrị iji ha. Lee ndị Top 10 Free MKV egbutusị nke ga-ekwe ka ị ngwa ngwa bee faịlụ na-enweghị erasing, ezighị ma ọ bụ na-eme ka nsogbu na mbụ faịlụ. Lelee video nkuzi n'okpuru iji nweta a ngwa nnyocha nke kasị mma free ngwọta bee / gbawara n'etiti videos mbụ .
Ihe omume ahụ bụ a free software nke ga-eme ka i nwee ebipụ ma ọ bụ Dọwaakwanụ video formats ẹdude ke AVI formats. SolveigMM AVI trimmer + MKV bụ pụrụ ịdabere na n'ihi na ọ na-ekwusi elu àgwà na nke kacha nta distortion. Ihe ọzọ bụ na, onye ọrụ interface dị mfe na-eme ka ihe aga-eme gh. Otú a, ị ga-jikwaa bee gị video faịlụ n'ime nkeji ole na ole na-enweghị izute ọ bụla ịma aka. I nwekwara ike bulite gị ịkpụ video on ị tube ozugbo iji nke a software.
Avidemux bụghị nanị a free video Ripper kamakwa a isonyere usoro. Mgbe na-eji ya, i kwesịrị ịchọ akwado formats dị ka MKV, OGM, AVI, FLV, MP4 nakwa dị ka mpg. Ọ na mfe na ya interface na ndị na-ahọrọ nke a video ọnwụ ngwá ọrụ kasị mma. N'otu aka ahụ, i nwere ike iji software na ndị ọzọ na ọdịyo na video formats si Dọrọ na dobe menu emi odude na n'aka ekpe. The n'ozuzu uru nke ngwá ọrụ a bụ na ọ na-akwado nkịtị aga-eme ruru ya mfe.
The Filmora MKV cutter bụ ihe magburu onwe ngwá ọrụ maka kewara nnukwu MKV faịlụ na nta Obere vidiyo. Ya interface na-adịghị mgbagwoju anya ikwe ka ọ na-eji site novices na ndị ọkachamara. Ọ bụ na-eju afọ n'ihi na ị nwere ike ibelata faịlụ ka ọ bụla size, ogologo na àgwà dabere na mmasị gị. Ihe ọzọ bụ na, àgwà nke video bụ ịtụnanya na i nwekwara ike preset dị iche iche parameters ka ezigbo ntọala ike a obi ụtọ faịlụ mmepụta. Ọ na-akwado bụghị nanị MKV faịlụ kamakwa nnọọ a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ video formats. Eze-free visual mmetụta na music n'ọbá akwụkwọ ga-azọpụta gị a otutu oge na mgbalị na-eke ndị kasị mma nke gị video. Lelee video n'okpuru iji nweta ntabi nnyocha nke pụtara visual mmetụta na music Akwụkwọ:
Download a free oyiri ka malitere ugbu a:
4. Free Video cutter joiner
Usoro ihe omume nwee-enyere gị ebipụ na mgbe ahụ sonyere videos dị iche iche formats dị ka MKV. Ị nwere ike mfe ikewapụ ma jikota ọtụtụ faịlụ a gaa bipụta size. Wezụga ripping faịlụ, software nwekwara-achọpụta rụọ nhazi na-esetịpụrụ ndị parameters nke mmepụta ka dakọtara nke ọsọ ọsọ. Dị otú ahụ na ntọala, ị ga-nweta njehie free faịlụ nke elu mma. Ke adianade do, ị ga-enweta elu ọnwụ ọsọ ma kwụsie ike ruru ka mfe iji interface. Otú ọ dị, usoro ihe omume ahụ adịghị enwe onye na wuru video agụ na window size-apụghị gbanwere.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a video Ripper na-akwado a dịgasị iche iche nke faịlụ, mgbe ahụ, VSDC Free Video Editor bụ ụzọ na-aga. Wezụga akwado MKV, ọ na-akwado ndị ọzọ faịlụ dị ka mpg, DAT, AVI, MOV, Flv, MP4 WMV, na DivX. Na nke a, ị nwere ike bee dị iche iche faịlụ ngwa ngwa na mfe. Ọ na-abịa na a video Ntụgharị na bụ ezigbo maka nkịtị aga-eme dị ka ogologo oge ị na-eji elu larịị processors.
N'adịghị ka ndị ọzọ-egbutusị, GilliSoft Video Editor ọzọ bụ ọkachamara. Ọ bụ dịtụ ọkaibe ma ọkachamara eme ya na ala. Na ya atụmatụ, ị nwere ike kewaa videos ka obere mkpachị na ịchọpụta ọrụ internally. Otú a, ị nwere ike ịbụ ihe ziri ezi. I nwekwara ike ịdọrọ faịlụ ka dashboard ma tinye mmetụta na na faịlụ na-eso ha na Facebook, YouTube, na ndị ọzọ na mobile ngwaọrụ. Ọtụtụ ihe, ị nwere zuru akara n'elu nchịkọta akụkọ ma ị nwere ike ịgbanwe ụda, oge na Michael.
SolveigMM Video cutter nwere ike kewaa a nso nke formatted faịlụ na aha MKV, WebM, FLV, AVI, MPEG na M2TS. Ndị a bụ nanị ma ụfọdụ nke formats-akwado site na usoro ihe omume ma na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ. The software he faịlụ dị ka nke ukwu nke faịlụ, size na oge. N'otu aka ahụ, i nwere ike ikpokọta ọtụtụ faịlụ ọnụ na ike a ibu faịlụ na ọnọdụ na format bụ otu ihe ahụ. Ọ bụ akpaka, nāwa osisi nọ ma ọdịyo na video faịlụ na dị mfe iji. Ọtụtụ ihe, ọ bụ na ezi na ọ dịghị ọnwụ mma.
Usoro ihe omume-enye gị ohere iji tọghata MKV formatted faịlụ ka AVI na hardcore sobtaitel ikpeazụ videos. Ke adianade do, MP4 na AVI formats na ọdabara. MKV ka AVI na sobtaitel nwere a dị mfe GUI (Graphic User Interface) na otu na ihuenyo. Ị ga-Otú ọ dị wụnye a CCCP codec maka a ngwa ngwa na ezi arụmọrụ.
Moo0 Video cutter kwe gị ịzọpụta gị kasị mma nkiri mkpachị dị iche iche videos na ị gaghị ida àgwà ma ọ bụ na-agba. Ị ga-kewaa videos n'ime oge ọ bụla ma na-enwe n'ụzọ ziri ezi. E wezụga na-akwado MKV faịlụ, usoro ihe omume dị ike ịkwado MP4, OGG, TP, OGV, MOV, WEBM, AVI, FLV na ọtụtụ ndị ọzọ. The ngwá ọrụ bụ onye ọrụ enyi na enyi na ike ịchọpụta nsogbu internally ịnọgide na-enwe kwụsie ike. Ke adianade do, ọ bụ mma dị ka gị faịlụ gaghị abụ ize ndụ nke ịbụ gụrụ nje, spyware na malware.
10. mara mma Video cutter
Mara mma Video cutter bụ usoro ihe omume onye ike na-enyere gị gbawaa gị videos ka obere akwụkwọ ya. I nwekwara ike tufuo ndị na-akụkụ ndị na-adịghị dị gị mkpa. Ọ nwere ike na-akwado ọtụtụ video formats gụnyere 3GP, RM, RMVB, DAT, VCD / DVD, VOB na ndị ọzọ. Buru n'uche na eji ngwá ọrụ a na-agaghị tamper na àgwà ma ọ bụ ndokwa nke faịlụ. The interface bụkwa n'ụzọ kwụ ọtọ na ị gaghị na-ezute na-egbu oge n'imezu nkịtị aga-eme. Dị nnọọ kọwaa na-amalite na-agwụcha ihe na-akọwa ihe dị gị mkpa.
Ha niile bụ ndị free MKV egbutusị, ọ bụrụ na ị chọrọ a dị ike ma dị mfe na-eji MKV egbutusị, na-agbalị Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Download free ikpe version n'okpuru.
Top Iri Free Video Players Play Video, Audio Kpamkpam
Top 5 Free MP4 Ntụgharị
Top 5 Free Data Recovery Mmemme
10 Sites maka Free Album Downloads
Free Ụzọ ka ịgbanwee Data si Nokia ka Blackberry
Top 5 Best Free FLV ka WAV converters
Hazie foto gị na Best Free Photo Ịhazi Software
The Best 5 Free Mac Photo Editors maka Photo-edezi na Mac
Olee otú Ifriizi a ụba
> Resource> Free> Top 10 Best Free MKV egbutusị